Al-Shabaab oo ka masayrsan Boko Xaraam iyo Daacish
Kooxda al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in ay ka masayrsan tahay argagixisada caalamiga ah ee warbaahintu aad loogu soo qaato, iyadoo Shabaabka wax hadal haya aysan jirin maadaama dalka intiisa badan laga xorreeyay, madaxdooda inta badan la laayay.
Haddaba si kooxda al-Shabaab ay isu muujiso, adduunkana u tusto in ay la mid tahay argagixisada waaweyn, sida Boko Xaraamta Nigeria iyo Daacishta Ciraaq iyo Siiriya, ayay waxay dhowaan soo saareen hanjabaad ah in ay weerari doonaan xarumaha laga dukaamaysto oo ku yaalla dalalka reer-galbeedka, sida Mall of America oo ku yaala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka iyo West Edmonton Mall ee ku yaalla gobolka Alberta ee dalka Kanada.
Soomaalida ku dhaqan dalalka ay Shabaabku u hanjabeen ayaa dhankooda inkaar kala dul dhacay argagixisada al-Shabaab. “Dalkeennii ayay burburiyeen haddana in ay dibadaha nagu dhibaateeyaan miyey rabaan?” ayay tiri Maryan Cusmaan oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Minneapolis, Minnesota mar la weydiiyay sida ay u aragto hanjabaadda al-Shabaab.
Hanjabaadda al-Shabaab ayaa waxba kama jiraan laga soo qaaday oo cidna dhag jalaq uma siin, iyadoo loo wada arkay in hanjabaaddaasi ay tahay booto raqiis ah maadaama la wada ogsoon yahay tabar darrida kooxda al-Shabaab ee la filayo in dhowaan gebi ahaanba la cirib tiro.
Horjooge al-Shabaab ka tirsanaa oo Hiiraan lagu dilay
Horjooge ka tirsanaa kooxda al-Shabaab oo magaciisa lagu sheegay Baryare Diiriye ayaa dhowaan lagu dilay deegaanka Dheen-weyne ee duleedka tuulada Halgan ee gobolka Hiiraan.
Ciidamada dowladda ee loo tababaray la dagaalanka argagixisada ayaa bilihii dambe mid mid u ugaarsanayay horjoogeyaasha al-Shabaab, iyadoo in ka badan toban horjooge oo muhiim u ah argagixisada dhowaan godadka ay ku dhuumaaleystaan loogu galay, qaar kalena lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay fuliyeen gaashaanbuurta taageerta dowladda.
Dhanka kale, degmada Maxaas ee isla gobolkaas Hiiraan ayaa waxaa dhowaan lagu dilay tobaneeyo al-Shabaab oo dadka baad ka qaadayay, iyagoo ugu marmarsiyoonaya bixinta Zakada. Ciidamada dowladda iyo Shabaabkaas burcadka ah ayaa rasaas is weydaarsaday, halkaas oo lagu laayay dhammaan burcadda dadka dhibaateyn jirtay.
Dowladda ayaa shacabka gobolka Hiiraan ugu baaqday in ay soo sheegaan Shabaabka wali gobolkaas ku dhuumaaleysanaya si degaannada ay dhibta ku hayaan looga xaaqo.
Jab hor leh oo Shabaabka ka soo gaaray Sh/Hoose iyo Puntland
In ka badan labaatan Shabaab ka tirsan ayaa ku dhimatay duqeyn dhanka cirka ah oo ka dhacday meel u dhow magaalada Marka, sida uu sheegay mas’uul magaaladaas jooga.
Cabdulqaadir Maxamed Siidi, barasaabka gobolka Shabeellada Hoose, ayaa saxaafadda u sheegay in diyaarada dagaalka ay duqeeyeen xero ay Shabaabku ku lahaayeen duleedka magaalada Marka, taas oo sababtay dhimashada labaatameeyo Shabaab, dambasna ka dhigtay gaadiidkooda dagaalka oo isugu jiray gawaari iyo doomaha hubku ku rakiban yahay.
Dhanka kale, ciidamada dowlad-goboleedka Puntland ayaa sheegay in ay dileen 10 maleeshiyada al-Shabaab ka tirsan oo ku dhuumaaleysanayay buuraha Galgala. Dagaalka ayaa dhacay kadib markii maleeshiyadu ay isku dayeen in ay afduubtaan xoolo-dhaqato, halkaas oo ay ciidamadu u soo gurmadeen, iyagoo badbaadiyay shacabkaas. Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa kol hore ku dhawaaqay in Shabaabka buurahaas laga xorreeyay, ciidamaduna ay saldhig ka dhigteen.
Argagixisada ayaa dharbaaxooyin isdaba joog ah kala kulma ciidamada dowladda. Waxaa laga xorreeyay dhulal badan oo ay horay gacanta ku heyn jireen, waxaana had iyo goor lala beegsadaa weeraro dhulka iyo cirka ah.
Shabaabka oo ay soo wajahday burbur aan laga soo kaban karin
Maleeshiyada al-Shabaab waxaa muddooyinkii la soodhaafay la soo gudboonaaday dhabar jab aad u xoog badan ka dib markii laga qabsday inta badan dhulkii ay xoogga kuhaysatay.
Sidoo kale waxaa la khaarijiyay hoggaamiyeyaashii kooxda oo uu ugu weynaa Axmed Godane oo duqeyn cirka ah lagu dilay. Toddobaadkii hore waxaa duqeyn diyaaradeed lagu dilayYuusuf Dheeg oo kooxda u qaabilsanaa sirdoonka iyo weerarrada dibadda. Waxaa ka sii horreeyay horjoogeyaal farabadan oo aad muhiim ugu ahaa kooxda al-Shabaab, la’aantoodna ay kooxdu burbur qarka u saaran tahay.
Qaarka mid ah hoggaamiyayaasha al-Shabaab ayaa ka soo goostay oo isu soo dhiibay dowladda Soomaaliya, iyagoo caddeeyay in ay rag gacan ku tiris ahi ay kooxda ku gaaraan danahooda gaarka ah, ayna ka been sheegayaan diinta Islaamka ee ay dhallinyarada ku dagaalgelinayaan.
Haddaba waxaa muuqata in wadada kaliya ee u furan ururkan argagixisada ee guuldareystay ay tahay in ay gebi ahaantoodba dowladda isku soo dhiibaan, shacabkana cafis weydiistaan iyagoo ka faa’ideysanaya ballanqaadkii dowladda ee ahaa in ciddii isi soo dhiibto la magangelinayo, lana daryeelayo oo shaqooyin loo abuuri doono si ay mujtamaca uga mid noqdaan.